को को हुन् माओवादीमा शक्तिशाली मन्त्रीको चर्चामा नेताहरु ? (विवरणसहित) | mulkhabar.com
को को हुन् माओवादीमा शक्तिशाली मन्त्रीको चर्चामा नेताहरु ? (विवरणसहित)
February 24, 2018 | 12:22 am 739 Hits
देशमा राजनीतिक स्थायीत्वसहितको बलीयो सरकार निर्माणको प्रक्रिया शुरु भएको छ । निर्वाचनमै बलीयो स्थीर सरकार दिने वाचा गर्दै एकतावद्ध रुपमा होमीएका दुई प्रमूख वामपंथी पार्टी नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार निर्माण गरिसकेको छ ।
संसदको सपथ ग्रहण विनानै प्रधानमन्त्री बनेका एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समान हैसियतमा पार्टी प्रमूख हुने र ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्दा प्रचण्डले पार्टीको कार्यकारी नेतृत्व गर्ने सहमति सहित ७ बुँदे एकताको प्रारम्भीक आधार तयार गरी चैतको पहिलो हप्तामा पार्टी एकताको तयारी पनि चलिरहेको छ ।
निर्वाचन सम्पन्न भएको तीन महिनापछि बल्ल सरकार गठनको प्रक्रियामा प्रवेश गरेका र करिब दुई तिहाई बहुमतसहित संसदमा उपस्थित भएका यी दुई दलले सरकारलाई पूर्णता दिन भने अझै सकेका छैनन् । नेकपा एमालेले आफ्ना द्दुई कमजोर पात्रलाई मात्रै मन्त्रीमण्डलमा सामेल गरेर सरकार चलाईरहेको छ भने प्रधानमन्त्री बनेको एक हप्तामा बल्ल माओवादी र एमालेबीच मन्त्रालयको नाममा सहमति जुटेको भनिएको छ ।
आफूले पाएको मन्त्रालयहरुमा पठाउने मन्त्रीहरुको नामावली यी दुबै दलले अझै टुंगाईसकेका छैनन् । माओवादी केन्द्रले मन्त्रीको नाम टुंग्याउने अधिकार अध्यक्ष प्रचण्डसहित नेताहरु नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामबहादुर थापा बादललाई दिएको छ भने एमालेले स्थायी समितिको बैठकमार्फत अध्यक्ष केपी ओलीलाई मन्त्रीको नाम अन्तिम रुपमा टुंग्याउने गरी अधिकार दिएको छ ।
माओवादी केन्द्रमा पुराना रैथाने र नव आगन्तुकहरुबीच मन्त्रालयको विषयमा छिनाझप्टी भएको भन्ने खालका समाचारहरु आइरहेका छन् । त्यस्ता समाचारहरुले माओवादी समर्थकहरुमा निराशा र असन्तुष्टि पैदा गरेको छ ।
माओवादी केन्द्रको तर्फबाट मन्त्री बन्ने सुचीमा चर्चामा रहेका नेताहरुबारे संक्षिप्त जानकारी ।
रामबहादूर थापा बादल
चितवन स्थायी घर भएका थापा माओवादी जनयुद्धताका सैन्य रणनीतिकारका रुपमा परिचित थिए । उनी तत्कालिन सरकारसँग दोश्रो वार्ता कालको क्रममा वार्ताकारको रुपमा राजधानीमा देखा परेका भएता पनि त्यसअघि नै जनयुद्धमा उपत्यका र मध्य कमाण्डको इन्चार्जसिप गरेका थिए ।
प्रचण्डका अत्यन्त निकट र समकक्षी नेताका रुपमा रहेका उनले प्रचण्डको पहिलो प्रधानमन्त्रीकालमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्रीको भुमिका निर्वाह गरिसकेका थिए । उनकै प्रस्तावमा ततकालिन सेनापति रुक्मांगत ककट्वालमाथि कार्वाही गरिएको थियो जसले गर्दा प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पद त्याग गर्ने स्थिति बनेको थियो ।
मोहन बैद्यको नेतृत्वमा पार्टी फुटाएर गएपछि प्रचण्डलाई गद्धारसम्मको आरोप लगाएको भनेर माओवादी वृत्त अत्यन्त दुखी भएतापनि बादलकै नेतृत्वमा पुनः पार्टीमा एकीकरण गरेपछि उनलाई पार्टीमा संगठन विभागको जिम्मा दिइयो । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा चितवन क्षेत्र नं २ बाट उठ्ने चर्चा भएतापनि एमालेले छाड्न नमानेपछि कुनै पनि स्थानमा नउठी त्याग प्रदर्शन गरेको भनेर वाही वाही बटुलेका थापा राष्टिय सभाको लागी प्रदेश नं ३ बाट उम्मेदवार बनाई विजयी गराइएको थियो ।
हाल थापाको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र सरकारमा सहभागि हुने चर्चा छ । गृहमन्त्रालयमा थापाले इच्छा देखाएपछि मन्त्रालय र मन्त्रीको टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
वर्षमान पुन अनन्त
माओवादीको प्रभावशाली युवा नेताको परिचय बनाएका पुन रोल्पाका स्थायी वासिन्दा हुन् । प्रतिनिधि सभामा रोल्पाबाट अत्याधिक मतका साथ विजयी बनेका अनन्त बाबुराम भट्टाईको नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री बनेका थिए ।
राजश्व संकलन सहितका विषयमा सफल अर्थमन्त्रीका रुपमा परिचित उनले पूर्ण बजेट भने ल्याउन पाएनन् । अनन्त त्यसपछि मन्त्री बनेका छैनन् । जनयुद्धमा पश्चिमबाट पुर्वी नेपालको कमाण्ड सम्हाल्न पुगेका अनन्तले राजधानी केन्द्रीत विशेष कमाण्डको पनि कमाण्ड गरेका थिए । पुर्वर राजधानी केन्द्रीत अधिकांश व्याटलहरुको पनि राजनैतिक कमाण्ड गरेका अनन्त पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डका अत्यन्त विश्वास पात्रका रुपमा चर्चित छन् ।
गम्भीर विरामी भई थाइल्याण्डबाट उपचारपछि स्वस्थ बनेका नेता । पत्नी ओनसरी घर्ती संविधानसभाको सभामुख हुँदा तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधिश शुशीला कार्की लगायतको वहिर्गमनमा जिम्मेवार व्यक्तिको रुपमा समेत चर्चित अनन्त यस पटकको मन्त्रीमण्डलमा गृह वा शक्तिशाली मन्त्रीको रुपमा चर्चामा छन् । अनन्त पत्नी तथा पुर्व सभामुख ओनसरी घर्ती समानुपातिकबाट प्रतिनिधि सभामा सांसद बनेकी छिन् भने बहिनी लालकुमारी पुन ललितपुरबाट प्रदेशसभामा प्रत्यक्षतर्फ विजयी बनेकी छिन् । रामबहादुर थापाले नेतृत्व नगर्दा माओवादी केन्द्बाट सरकारमा जाने मन्त्रीहरुको नेतृत्व अनन्तले गर्ने करिब करिब निश्चित भएको थियो ।
माओवादीमा दार्शनीक नेताको रुपमा परिचित गुरुंग मनांगका स्थायी वासिन्दा हुन् । प्रतिनिधि सभामा लमजुंगबाट विजयी गुरुंग रामबहादुर थापा बादलको नेतृत्वमा बैद्य माओवादीबाट विद्रोह गरी माओवादी केन्द्रमा सामेल भएका हुन् । जनयुद्धको तयारीमा पहिलो राइफल संकलनको प्रमूख भूमिका निर्वाह गरेका नेता गुरुंग प्रचण्डले राम्रा नेता मान्ने मध्येका एक हुन् । माओवादी शान्ति वार्तामा आएका बेला गठित अन्तरिम सरकारमा स्थानिय विकास मन्त्री बनेका गुरुंग अहिले माओवादी केन्द्रका प्रदेश नं ४ का इन्चार्ज समेत हुन् । गुरुंग पत्नी तथा माओवादी नेतृ यशोदा गुरुंग सुवेदी प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक तर्फबाट सांसद बनेकी छिन् । उनी राजनैतिक अर्थशास्त्रमा दख्खल राख्दछन् । उनी पनि प्रदेश ४ बाट मन्त्रीमण्डलमा प्रतिनिधित्वको रुपमा चर्चामा छन् छ ।
मातृका यादव मधेशी मध्ये लोकप्रीय नेतामा पर्दछन् । जनयुद्ध कालमा अत्यन्त चर्चीत यादव यस अघि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा बन तथा भुमिसुधार मन्त्री बनेका बेला एक डिएफओलाई मन्त्रालयको टवाइलेट भित्र थुनिदिएको भनेर चर्चीत बनेका थिए । उनले कर्मचारी तन्त्रलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने अड्डी लिएका थिए । उनी तत्कालिन एमाओवादी परित्याग गरी नेकपा माओवादी पार्टी नै बनाई गतिविधि संचालन गरेका थिए । पछि बादल समुह सँगै उनी पनि सिंगै पार्टी नै एकीकरण गरी माओवादी केन्द्र निर्माण भएको थियो । उनले प्रतिनिधि सभामा धनुषाबाट विजयी बनेका हुन् । अल्ली घमण्डी स्वभावका रुपमा चर्चीत उनी ओली नेतृत्वको यस पटकको मन्त्रीमण्डलमा मधेशी मूलबाट मन्त्री बन्ने पक्का पक्की छ ।
माओवादी केन्द्रमा अत्यन्त जुझारु र स्थापीत महिला नेतृका रुपमा परिचित भुषाल हाल ललितपुरकी स्थायी वासिन्दा हुन् । ललितपुर क्षेत्र नं ३ बाट प्रतिनिधि सभामा विजयी भुषाल अविवाहीत नेतृ हुन् । तत्कालिन संयुक्त जनमोर्चाको नेतृका रुपमा समेत स्थापित भुषाल यस अघि महिला मन्त्री बनकी थिइन् अत्यन्त छोटो समयकालमा पनि राम्रा निर्णय गरेको भनेर प्रशंसा कमाएकी नेतृ भुषाल मोहन बैद्यको नेतृत्वमा पार्टी फुटाएर क्रान्तिकारी माओवादीको रुपमा संविधानसभाको दोश्रो निर्वाचन वहिस्कार गरेकी थिइन् । पछि रामबहादुर थापाको नेतृत्वमा माओवादीमा एकीकरण प्रक्रियामा सामेल भएकी नेतृ भुषाल हाल माओवादी केन्द्रको प्रबक्ता रहेकी छिन् । उनी पनि यस पटकको शक्तिशाली मन्त्रीको रुपमा चर्चामा छीन् । उनी महिलातर्फको निर्विकल्प पात्रको रुपमा चर्चामा छिन् ।
माओवादी मन्त्रीहरुमा सबैभन्दा वढि चर्चीत मन्त्रीको रुपमा वाही वाही कमाएका शर्मा रुकुमका स्थायी वासिन्दा हुन् । रुकुमबाट प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा विजयी बनेका शर्मा के पी ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा उर्जा मन्त्री र शेर बहादुर देउवाको पालामा गृहमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेका नेता हुन् । दुबै मन्त्रालयमा राम्रो छाप छाड्न सफल उनी केपी ओलीले समेत रुचाएका मन्त्रीको रुपमा चर्चामा छन् । पटक पटक मन्त्री भएका शर्मा आफन्तहरुका पक्षमा दृढतापूर्वक लविंग गर्ने मन्त्री र नेताको रुपमा आलोचित छन् ।
जनयुद्धमा अत्यन्त सफल कमाण्डरको रुपमा छवी बनाएका उनका एक भाइ राससका महाप्रवन्धक छन् भने अर्का भाई काठमाडौं क्षेत्र नं १ बाट प्रतिनिधि सभामा उम्मेदवार रहेका थिए । उनी यस पटक गृह, उर्जा वा शक्तिशाली मन्त्रालयको वलियो दावेदारको रुपमा चर्चामा छन् ।
माओवादीमा प्रचण्ड पक्षको अत्यन्त वलियो खम्बाको रुपमा परिचित सापकोटा सिन्धुपाल्चोकका स्थायी वासिन्दा हुन् । सिन्धुपाल्चोक २ बाट प्रतिनिधि सभामा विजयी सापकोटा जनयुद्धकालमा समेत अत्यन्त चर्चित नेता हुन् । एक पटक संचार र एक पटक बन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सफलतासाथ सम्हालीसकेका सापकोटा विचारमा दृढ र व्यवहारमा लचकदार नेताको रुपमा स्थापित छन् । सिंगै परिवार पार्टी र जनयुद्धमा सहभागि सापकोटा यस पटकको मनत्रीमण्डलमा मन्त्रीको रुपमा चर्चामा छन् ।
माओवादीमा शालिन नेताको छवी बनाएका बस्नेत जाजरकोटबाट प्रतिनिधि सभामा विजयी बनेका नेता हुन् । केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारमा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी निर्वाह गरेका नेता बस्नेत फेरी गृह वा शक्तिशाली मन्त्रीको रुपमा चर्चामा छन् । प्रचण्डको पुर्व प्रमूख स्वकीय सचिवको भुमिकामा रहँदा कोटेश्वरमा गोली प्रहारबाट बाल बाल बँचेका बस्नेत प्रचण्डको विश्वासिला नेतामध्येमा पर्दछन् । बस्नेत पत्नी सत्य पहाडि पनि यसपटकको प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक तर्फबाट सांसद बनेकी छिन्, पहाडि पुर्व शान्ति मन्त्री पनि हुन् ।
माओवादीमा बौद्धिक नेताको छवी बनाएका पौडेल वाग्लुंगबाट प्रतिनिधि सभामा विजयी बनेका नेता हुन् । जनयुद्धमा पुरै सहभागि नेता पौडेल तत्कालिन माओवादी केन्द्र परित्याग गरी डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति नेपालमा समाहित भएका थिए । त्यपछि पार्टीको कार्वाहीमा परेका नेता पौडेल बाबुरामको पार्टीबाट आफ्नै नेतृत्वमा पुनः फर्कीएपछि बाग्लुंगमा टिकट दिइएको थियो । यस अघि बाबुराम प्रधानमन्त्री छँदा प्रमूख राजनीतिक सल्लाहाकार रहेका पौडेल हालसम्म कुनै पनि मन्त्रालय नसम्हालेका नयाँ नेता हुन् । एउटा ठूलो समुहलाई पार्टीमा धु्रवीकरण र एकतावद्ध गराएपछि उनीप्रति प्रचण्डको विश्वास बढेको पाइन्छ । उनी पनि यस पटकको मन्त्रीमण्डलमा शक्तिशाली मन्त्रीको दावेदार हुन् ।
माओवादी केन्द्रबाट मन्त्रीको रुपमा चर्चामा रहेकी विना उमेर र राजनीतिक हिसावले सबैभन्दा कान्छि नेतृ हुन् । कञ्चनपुर जन्म घर भएकी मगर विद्यार्थी राजनीतिमा रहँदा ततकालिन सेनाले गिरफ्तार गरी २७ महिनासम्म बेपत्ता बनाएकी नेतृ हुन् । प्रतिनिधि सभामा कञ्चनपुरबाट २० हजारको अन्तरले विजयी मगर प्रचण्ड पुत्र स्व. प्रकाश दाहालकी पत्नी समेत हुन् । पतिवियोगमा समेत निर्वाचनमा होमीएर विजयी बनेकी भन्दै ७ नं प्रदेशबाट विनालाई मन्त्री बनाउने लविंग र दवाव रहेको छ । प्रदेशको दवाव र विनाको अधिकारलाई स्थापित गर्न विनालाई मन्त्रीमण्डलमा सामेल गराउनुपर्ने वाध्यात्मक अवस्था प्रचण्डलाई बनेको छ । विनाको सांसदको रुपमा सिंहदरबार प्रवेश प्रथम पटक हो । यस अघि संविधानसभाको दोश्रो निर्वाचनमा थोरै मतान्तरले पराजीत बनेकी विना मगरले यपटक सानदार ढंगले विजय हासिल गरेकी हुन् ।
मोरंगबाट प्रतिनिधि सभामा विजयी मोदी मधेशी मूलका युवा नेता हुन् । प्रदेश १ बाट मन्त्रीको सिफारिसमा परेका माओवादी नेता मोदी यस पटकको बलियो मन्त्रीका दावेदार हुन् । मोदी पनि यस अघि मन्त्री बनेका छैनन् ।
भोजपुरबाट प्रतिनिधि सभामा विजयी बनेका किराँती प्रदेश नं १ बाट मन्त्रीको सिफारिसमा परेका प्रभावशाली युवा नेता हुन् । माओवादी नेता तथा प्रदेश नं १ का इन्चार्ज गोपाल किराँती साइलाले पार्टी परित्याग गरेपछि त्यस क्षेत्रको राजनीति टिकाउन किराँतीलाई मन्त्रीमण्डलमा समावेश गर्नुपर्ने १ नं प्रदेशको दवाव छ । जनयुद्धमा सहभागि नेता किराँती यस अघि मन्त्री बनेका छैनन् ।
काठमाडौं, ८ पुस । नेपालले उत्पादन गरेको विजुली बेच्न अब धेरै सजिलो भएको छ । उर्जा मन्त्रालयको पहलमा भारतले क्रस…
काठमाडौं, ५ पुस । सरकारका मन्त्रीहरुले आफूहरु विरुद्ध मिडिया अनर्गल प्रचारमा उत्रिएको भन्दै यथार्थ बुझ्न मन्त्रालय आउन चेतावनी दिएका छन्…
बंगलादेश पुगेर के भने उर्जामन्त्री पुनले ? भयाे यस्ताे सम्झाैता
देशकाे विकासकाे लागि सिञ्चाइ र उर्जाकाे विकास अावश्यक : मन्त्री पुन